Etinyekwala Email na Azụ Azụ! | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 18, 2011 Vlọ Lavon
Na nke ikpeazụ Delivra ọbịa ọbịa n'ihi na Martech, Neil gụnyere a nnyocha e mere na-arịọ gị niile ihe ụfọdụ n'ime ndị isi mgbochi bụ na ị na-eche ihu gị email mmemme. Otu n'ime ha bụ enweghị oge iji mezuo ihe achoro. M ghọtara kpamkpam na-enwe nsogbu n'ihi na oge; ọ dị ka ọ dịghị oge awa zuru ezu n'ụbọchị!
N'ikwu nke a, ana m agba gị ume ka ị mee mmemme email gị a mkpa. Ọ bụrụ na ịmalitebeghị mmemme email, ọ bụ oge gara aga ịmalite. Ọ bụrụ na ibido mmemme, mana ị na-eleghara ya anya, ana m agba gị ume iwepụta oge ịtụle ma chọpụta mpaghara ndị chọrọ nlebara anya ozugbo. Etinyela mmemme email gị na azụ burner!
Nyochaa atụmatụ ịre ahịa email gị
Hichapụ depụta ma wepu adreesị ndị na-adịghị mma
Mepụta ohuru na ọdịnaya dị mma
update Detuo nke na-elekwasị anya na-eme ka ndị na-ege gị ntị nwee ume ma na-agba ha ume ime ihe
Iwere oge ilekwasị anya na mmemme ịre ahịa email gị nwere ike ịbụ ihe dị iche na iru ndị na-ege ntị ka ukwuu, weghachite ndị na-ege gị ntị ugbu a, na ịmepụta ROI ka ukwuu. Na New Year na-abịa, nke a bụ oge zuru oke iji wepu mmemme ịre ahịa email gị n'azụ ọkụ ma mee ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa!
Tags: Ndiaguahịa delivra emailkpaliri atụmatụ afọ ọhụrụemail azum
Nov 18, 2011 na 1:06 PM
Fantastic post, @lavon_temple: disqus! Enwere m ike ikwu, n'onwe m, email ahụ enweela nnukwu mmetụta na uto anyị na Blog Technology Blog. Ọ bụrụ na m mara mmetụta ya, agara m eme ya nnukwu mkpa karịa afọ ndị gara aga.